Way Natural mhlophe Amazinyo Easy | Indlela Engcono Kakhulu mhlophe Amazinyo Guide
Way Natural mhlophe Amazinyo Easy
Uma ufuna Indlela yemvelo mhlophe amazinyongaphandle kokuthenga bonke labo kits ezibizayo, nje phindela Olden izikhathi. Sebenzisa amakhambi ekhaya ukuthi ugogo kanye nomama cishe kakade wazi. Uma kukhona ubuhlungu, ubuhlungu, Imi, noma yini enye, khona njalo kwaba isixazululo noma ikhambi ecasha out ekhabetheni endaweni ethile. Esifanayo siyasebenza amazinyo mhlophe. Cabanga Indlela yemvelo mhlophe amazinyo ngezansi futhi nimangale imiphumela yibo esetshenziswa.
Uma nithanda strawberry futhi yebo akuzona iguliswa kuso, ganawap make some okusaswidi sitrobheli zibe mhlophe amazinyo akho ngesikhathi esifanayo. Strawberry is a Indlela yemvelo mhlophe amazinyo. Just usike sitrobheli esikhulu ngesigamu nendawo emlonyeni wakho. Qiniseka ngaphakathi ngaphakathi emlonyeni wakho. Hlikihla wonke ukuthi Yummy sitrobheli juice kanye sitrobheli zonke phezu amazinyo akho, zize zonke embozwe in pink. Linda omuhle imizuzu eyishumi bese usebenzisa umuthi wokuxubha yakho. wokuxubha Yakho Yebo kufanele kube bonke zemvelo futhi akukho Abrasives noma neminye imiphumela eyingozi. Kuye kanjani white ufuna, ukwenza lokhu kabili ngosuku uma ukuxubha kabili ngosuku. Have ukubekezela, nsuku zonke uzobona amazinyo ngokwemvelo mhlophe. Lokhu kukhombisa godu nokuthoma kuzonisiza ikhofi amabala yini enye ukunciphisa ndawo, kuzwakala on amazinyo akho.
Kungenzeka ukuthi wake wezwa ngeSango baking soda amazinyo akho. Uma ungakakwenzi, ke wena kakhulu, young kakhulu. Noma ubani oneminyaka engaphezu kwengu-amane kuya kwabaneminyaka engamashumi ayisihlanu uyazi umama noma ugogo ukuthi baking soda kuyinto Indlela yemvelo mhlophe amazinyo nje ukuxubha amazinyo akho. Yebo, mhlawumbe wokuxubha yayisetshenziswa. Kodwa, Uma uke waba amadala abazali isizukulwane, baking soda wayehlale ohlwini. Yebo-ke ngempela ukusebenza futhi non athile. Sebenzisa kuphela ingxenye yesine uma ukuxubha amazinyo akho njengoba lokhu kuyinto Indlela yemvelo mhlophe amazinyo. Vele uthole isixubho sakho elina aligcobhoze kulawo soda baking. Ngemva ukuxubha ukususa ukunambitheka, usebenzise zonke yemvelo umlomo wash ngoba lokho minty muzwa ahlanzekile. Manje, wena nje wafunda elidala kakhulu kuyisidala Indlela yemvelo mhlophe amazinyoekhaya.
Sonke sebenzisa uviniga ukuze kuhlanzwe nge. Imikhiqizo yokuhlanza uthenga ube uviniga in ndawana-thile, uma kukhona yemvelo ngempela. Anyway, Indlela yemvelo mhlophe amazinyo at ikhaya, sebenzisa uviniga white kuphela futhi cishe isigamu inkomishi. Futhi engeza mayelana isipuni sikasawoti uma ufisa. I usawoti kusiza qinisa up izinsini zakho ukuthi olubucayi ukopha kukhona. It is a ikhambi lemvelo ukusiza. Ngaphambi kokuya ukulala ebusuku, nje sebenzisa it njengoba mouthwash futhi Hashaza kahle. Amazinyo akho luqine futhi ubonise ngokumamatheka enhle.
Uma ngempela bangamavila nokufunda bonke labo izindlela kanjani mhlophe amazinyo ekhaya ubukeka kanzima kakhulu, nje sebenzisa Mint wokuxubha. izikhathi Sebenzisa okungenani amabili kuya kwamathathu usuku. Amazinyo akho Nakanjani sizobe ekhanya fast kakhulu. Ungakwazi kanye igagasi phezu internet ukuze abuthele ukwaziswa okwengeziwe mayelana imibono mayelana Indlela yemvelo mhlophe amazinyo.
Izigaba: Mhlophe Amazinyo Tips Tags: Indlela yemvelo mhlophe amazinyo, ijikijolo, wokuxubha, namazinyo zibe mhlophe